Opera dia mankany amin'ny Webkit | Avy amin'ny Linux
Amin'ny fihodinana tsy ampoizina dia ny zazalahin'i Opera Software nanambara fa hijanona tsy hampiasa ny maotera fandikan-teny azy manokana ilay mpitety tranonkala norveziana (Presto) manohana ny WebKit. Ny antony manosika? Miala amin'ny fitenenana aho (nadika) ny tenin'ny Chief Technology Officer anao:
"Ny motera WebKit dia efa tena tsara, ary ny tanjontsika dia ny handray anjara amin'ny zavatra tsara kokoa. Mifanaraka amin'ny fenitra tiantsika izy io, ary misy ny fahombiazana ilaintsika »
“Misy dikany kokoa ny fiarahan'ny manampahaizana antsika miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina misokatra mba hanatsara bebe kokoa WebKit ary Chromium, fa tsy mamolavola ny motera fandikan-tenantsika manokana. Opera dia handray anjara amin'ny tetik'asa WebKit sy Chromium, ary efa namoaka ny patch voalohany izahay… »
Izaho manokana dia mitondra ahy ho any an-dohako ny vaovao momba azy .. Amin'izao fotoana izao, mangatsiaka ary tsy mamakafaka loatra ilay lohahevitra na fantatro izay eritreretiko.
Voalohany indrindra, heveriko fa dingana iray lehibe ny te hiara-hiasa amin'ireo tetikasa openource, ary angamba satria tsy manam-pahalalana amin'ireo olana momba ny haitao ireo ny fahitako dia tsy tonga mihoatra ny oroko, fa raha mijery azy avy amin'ny teboka mifaninana, inona ny fotony? mandray anjara amin'ny Chrome / Chromium ka? Aleo miala Opera ho toy ny mpizaha ary manatevin-daharana ny fampandrosoana ny browser Google.
Izany rehetra izany dia vokatry ny Opera nahatratra 300 tapitrisa ireo mpampiasa araka ny filazan'izy ireo, manisa ny fampiasana rindrambaiko amin'ny PC, Telefaona, Televiziona sy ny hafa, ary hahazo tombony bebe kokoa izy ireo raha manatona Android e iOS. Ary heveriko fa izany indrindra no antony nanapahanao hevitra hiditra WebKit ary tsy tokony Gecko.
Webkit ampiasain'ny mpitety maro: Safari, Chromium, Midori, Rekonq, Web (Browser Gnome), ankoatry ny hafa, toy ny hoe lasa fenitra io, ary misy lafiny tsara io, indrindra ho an'ireo mpamorona izay tsy mila miahiahy momba ny tranokalany fa tsara Opera, IExplorer, Firefox, Chrome, fa amin'ny lafiny iray kosa mihena ny safidy hafa ..
Raha lazaina amin'ny teny hafa, tsy hitako ilay teboka hoe be loatra ny mpanamory mijery ny motera raha toa ka amin'ny farany dia tsy hiova firy izy ireo amin'ny resaka fahombiazana sy ny fanjifana loharanon-karena .. Angamba mety hitarika tsikelikely ho faty an-dalambe ny maro amin'izy ireo, mamela ny matanjaka indrindra manana fanohanana tsara kokoa izany.
Etsy ankilany, ho an'ny mpampiasa ny Opera Dingana iray handrosoana io, satria misy tranokala sasany azo jerena tsara kokoa noho ity mpitety tranonkala ity dia tsy azo atao sary an-tsaina tsara, saingy hahaliana ny mahita raha ho very ny toetra tsara rehetra ananan'ity rindrambaiko ity.
Averiko indray, tsy afaka mieritreritra an'ity olana ity amin'ny mazava kokoa aho izao .. Ahoana ny fahitanao azy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Opera dia mankany amin'ny Webkit
Raha tsy hiteny afa-tsy ny hafahafa !!! Ny fanapahan-kevitr'i Opera hiova amin'ny webkit, manantena aho fa tsy fanapahan-kevitry ny karazana Oracle ireo.
Vaovao Linux dia hoy izy:
Hilaza ny fotoana raha marina ny fanapahan-kevitra na tsia.
Valio ny vaovao Linux
Toy izao no fahitako azy
Manaiky tanteraka. Webkit dia hamorona vokatra mitovy amin'ny IE6. Izany no antony hatramin'ny hatramin'ny farany amin'ny Firefox (izay maivana indrindra hanombohana azy).
Toy izany koa no fahitako azy.
Ary hitako koa ny tanan'ny Google fa tsy maintsy naloany izy ireo hampiasa Chromiun. Satria ny chomium dia ho loharano misokatra be, saingy ny kinova fitsapana an'ny Google Chrome ihany.
Mamaly ny tanrax
Any no ho fanalahidin'ny Opera manolotra tantara vaovao sy mahasoa ao amin'ny browser, zavatra izay niavaka hatrany raha ny fahalalako azy
Farafaharatsiny ho ahy, ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny Opera dia ny fanombohana haingana.
Eny, arakaraka ny mahataitra azy io.
Manantena aho fa misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny fampiharana amin'ny fomba tsara fotsiny izany, halako ny fotoana fanombohan'ny Firefox. Tsy dia manana loharano firy ny ekipako ary tena ilaina io karazana zavatra io amiko.
Amin'izao fotoana izao dia tsy manana olana amin'ny fijerena tranonkala aho, matoky aho fa amin'ity dingana ity dia hihatsara ny zava-drehetra.
Fantatro fa zava-dehibe ny fahombiazan'ny programa mandritra ny fihazakazahana, ary ny kinova farany an'ny Firefox dia manana fahombiazana tena tsara. Saingy tsy azoko hoe maninona ireo "fotoana fanombohana" amin'ny programa dia "fototra". Fa maninona no ~ kritika ~ fa manomboka 2 segondra haingana ny programa?
Miombon-kevitra amin'i Robert aho, raha ny fijeriko ny fisafidianana Browser iray ao amin'ny Internet dia ny teboka heverina fa: fiarovana / fiainana manokana, fitoniana / fahombiazana ary fiasa (eto dia azonao atao ny mampiditra ireo plugins sy addons), ao amin'io lamina io.
Mitady ny fifandanjana amin'ireo teboka ireo dia tena tiako kokoa ny Firefox.
Amin'ny lafiny WebKit dia tsara, amin'ny lafiny Opera dia dingana mampiahiahy io,
Opera dia tsy maintsy mamolavola (na manatsara) ny interface tsara kokoa ary manavao izany, raha te hifaninana.
Na interface tsara kokoa aza ?? farito ho namana ny anao, azafady: /
Ao anaty drafitra tsara no ilazako azy, tsy fanamby mirehitra izy io.
Mahatsapa aho fa ny Opera dia manana interface tsara indrindra sy azo ovaina amin'ny mpizaha tena tsy miankina iray (ny iray hafa dia i Maxthon, saingy miankina amin'ny motera IE6 fotsiny ary kely amin'ny 7).
Mino aho fa nametraka ny tapakilan'izy ireo i Google
Hatramin'ny nametrahan'izy ireo an'i Presto azafady, afaka manafaka azy izy ireo. Izaho dia miankin-doha amin'ny amboahaolo, fa fantatro tsara hoe toy ny ahoana ny hafainganam-pandehan'ny Opera (na koa ny fanavaozana azy). Raha tokony ho very ny fampandrosoana rehetra ao ambadiky ny Presto, ny mpankafy Opera iray dia afaka mamerina azy io tahaka ny ankehitriny (na tsia, mety teraka ny mpanamory hafa na manao izay manam-pahaizana manokana amin'ny faritra sasany)
Ho an'ny ambiny, heveriko fa tsy ratsy ny andehanan'izy ireo sy mandray anjara amin'ny WebKit, tsara foana ny manampy mpandrindra amin'ny tetikasa maimaimpoana.
Ny "amboahaolo" dia panda afo ...
Tsy toa panda mena ny sary famantarana. Araka ny nolazain'izy ireo fa nentanin'ny amboahaolo mirehitra izy ireo.
Ilay zavatra heveriko ihany fa Presto dia nahaliana loatra indrindra tamin'ny fanavaozana farany izay nahavariana ny fanohanana ny webGL. Ho very maina izany raha tsy mamoaka ny kaody intsony izy ireo any aoriana (na dia mety amin'ny fotoana anaovany azy aza dia efa antitra sy lany andro).
Mpankafy Opera dia hoy izy:
Toa fihetsika stratejika ataon'ny Opera izany amiko, fa fanapahan-kevitra ratsy
Efa namaky doka Webkit be dia be aho ary miaiky aho fa ny fampiasana Chrome dia misy tranonkala maro izay toy ny diky miaraka amin'i Webkit, noho izany dia tsy azo hamarinina fa tsara lavitra noho i Presto na i Gecko,
Izaho manokana dia manana fifanarahana bebe kokoa amin'ny Presto,
Opera dia tokony hampiasa Presto hatrany ary hamoaka ilay kaody
Valio ireo mpankafy Opera
Tsy fahadisoan'ny webkit akory ny miseho ny pejy ratsy; fa ny webmaster.
"Opera dia tokony hampiasa Presto hatrany ary hamoaka ny kaody"
Fanjohian-kevitra mamirapiratra izany.
Presto dia efa ela ny tombotsoan'ny Opera Software ary noho izany antony izany dia niaro azy nify sy hoho. Raha manokatra WebKit ianao izao, dia ampahany lehibe amin'ny mombamomba an'i Opera no very amin'ity dingana ity ...
Ny fanapaha-kevitra hampiasa WebKit amin'ny Opera dia toa hetsika mihetsika stratejika mieritreritra ny ho avy satria izy ireo dia nandray ny iray amin'ireo teknolojia misokatra izay nitombo indrindra tato ho ato, tsy isalasalana fa ny sanda ampiasain'ny Opera dia eo amin'ny "haingon-trano" napetrak'izy ireo WebKit, ohatra DragonFly, mpitantana mailaka ao aminy, sns.
Ankehitriny, araka ny filazan'ny mpankafy an'i @Opera, fa tsy hanangana WebKit dia afaka nanokatra ny kaody ny moterany izy ireo ary nanosika azy handroso; Raha ny zavatra tadiavin'izy ireo ankoatry ny zavatra hafa dia ny hanafainganana ny fivelarana ny browser (ny plugin dia entina fotsiny) na hampihena ny vidin'ny fampandrosoana ao an-trano dia mety ho nahazo alalana Presto tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana F / LOSS vitsivitsy izy ireo ary tamin'izany fomba izany dia nanohy nitazona ny azy ireo izy ireo ny maha izy azy sy ny fomban-drazana.
Tsy maintsy jereko hoe aiza no misy an'io ary inona no tadiavin'izy ireo mandritra ny fotoana maharitra.
Na dia misy dikany betsaka aza ny fanjohian-kevitrao, zavatra iray ihany koa noezahako naseho tamin'ity forum ity fa angamba tsy nanana fahendrena aho nanehoana izany tamin'ny fomba sahaza.
Ny zavatra lazain'ny CTO dia misy dikany be amiko raha mifantoka na mifanindry ireo distros Linux isika. Araka ny efa nanamarihako tamin'ny tranga hafa dia toy ny vary izy ireo ary ny ezaka sy angovo natokana amin'ny fananana distros maro kokoa dia mahatonga izany amin'ny faran'ny andro mihalefaka na mihalevona rehefa mandeha ny fotoana.
Heveriko fa ity eritreritra hanamafisana sy hiasa amina vokatra ity fa ny fampiasana fitaovana efa misy ary ny fanokanana loharanon-karena, fotoana ary angovo amin'izany dia mahatonga ahy hanana vokatra bebe kokoa noho ny miasa irery sy mitokana ao anaty ranomasina safidy.
Tsy te hiteny aho hoe ratsy ny fananana safidy hafa, fa ny tena fahitana fotsiny hoe be dia be ny buntus, debianes, archeras, susera, sns. na, raha tsy izany, akorandriaka ho an'ity na izatsy, dia ho hendry kokoa ary ambonin'izay vokatra rehetra manararaotra izay misy dia manatsara sy miasa amin'ny fitaovana izy ireo hanomezana ny famitana tadiavina ny birao irina.
Omeko anao ny ohatra SolusOS (Ikey) maninona raha miasa miaraka amin'ireo loharano sy fitaovana izay tokony hanomezan'ny GNOME ny akorany ho azy, manararaotra ny fahafaha-manana feno akorany. Ny tiako holazaina dia tsy ny fameperana ny famoronana sy ny faniriana hanao zava-baovao, fa ny marina ary ny mangatsiaka amin'ny famakafakana, ny famatsiana diso tafahoatra dia ratsy toy ny mifanohitra amin'izany ary matetika dia miteraka fitetezana hantsana tsy misy ambadika.
Tsy maintsy omentsika fotoana izany ary ho hitantsika izay vokatr'io fanapahan-kevitra io.
marina ny anao, ny olana fotsiny dia ny fifantohan'ny fahefana, rehefa misy olona manana 50% mihoatra ny tsena dia tsy maintsy misy roa na telo hafa.
ps: antenaina fa tsy hanaparitaka ny kalitaon'ny opera miasa amin'ny solosaina ity loharanom-pifandraisana ity ary manana fampiasana marani-tsaina ilay ondrilahy misy
Marina ny voalazanao, satria hiditra amin'ny olana mitovy amin'ny M $ sy ny paoma ihany izahay. Raha ny fijeriko manokana sy momba ahy manokana dia be loatra ny karazany amin'ny zava-drehetra. Amin'ny ankapobeny dia tiako ity, fa rehefa tratra ny tafahoatra dia lasa malemy ny tanjaky ny teo aloha.
Omeko anao, ohatra, ny tranga GNOME (izay ampiasako) Shell, mieritreritra aho fa mety hahitam-bokatra kokoa sy irina kokoa noho ny ezaka rehetra ataon'ny ekipa Elementary, SolusOS, Mint, sns. (hanome ohatra vitsivitsy) amin'ny fanaovana variant satria tsy tiako ity na io, miasa amin'ny fanaovana extensions ary ireo no motera fanovana ny interface Shell mihitsy; Hany ka ny ekipan'ny GNOME mihitsy no miasa amin'ny fanitarana hahafahanao (araka ny hita amin'ny tranokalan'izy ireo) hanana ny birao nentim-paharazana mampiasa extensions ary hifanaraka amin'ireo famoahana isan-karazany navoaka.
Zavatra tiako ampiana.
Tsy hoe tsy mety ny vita, mampanankarena izany fa mila tanjaka ny tontolon'ny Linux fa tsy fahalemena. Mino aho fa tsara kokoa ny manao matanjaka kokoa, marin-toerana, mifanentana ary mifampitohy noho izay manao zavatra bebe kokoa ary mijanona ho mitovy ny zava-drehetra.
Araky ny fitenenana hoe "izay manarona be dia potserina kely"
Raharaha ny fomba fiasa, amin'ny rindrambaiko maimaimpoana dia tsy misy ezaka very maina na fako angovo, na dia ajanona aza ny tetikasa raha misy ny kaody loharano, misy olon-kafa afaka mampiasa azy io, na inona na inona tsy fizarany ny fomba fijery na ny tsiron'ilay mpandrindra voalohany.
Indraindray isika maika loatra ka manome lanja ny famokarana ary manadino fa ny rindrambaiko maimaimpoana dia tsy mikasa ny hanatsara fa ny hivoatra. Raha mifantoka amin'ny famolavolana rafitra isika, iza no hamorona ireo zava-baovao?
@staff Raha hanavao dia hisy foana ny olona, ​​matetika misy vitsivitsy manavao, fa ny ankamaroany dia tsy manavao, maka tahaka, manova loko ary mametraka tsipika kaody iray hafa, ary miantso programa vaovao io fork io. Ny ilain'ny Linux eo amin'ny birao dia ny ezaka iraisana mba hahatonga an'i DE ho tena matanjaka (ankoatry ny KDE), azo ovaina sns ..., fa amin'ny farany, minoa hatrany fa ny fiolahana sy ny fahalalahana dia zavatra mitovy.
@ pandev92, Ny ilain'ny Linux dia ny hevitrao tsy dia manetriketrika loatra, soa ihany fa ireo mpampiasa / mpamorona dia tsy manana adidy hanambany tena amin'ny fahitana, filozofia na tsiro na iza na iza fa ny azy manokana rehefa tsy manana karama amin'ny asa ataony izy ireo . Ary tsy inona izany fa ny fanaovana an-keriny, na farafaharatsiny tsy manana famaritana ny debauchery hampifanaraka azy ny diksionera.
Lazaiko aminao foana ny mpiasa, fa amin'ny Linux saika tsy misy fanavaozana, ankoatry ny mpamorona karama vitsivitsy, amin'ny alàlan'ny satroka mena, intel, ubuntu na openuse. Ary tsia, ny fahalalahana dia tsy midika hoe manao fako be dia be raha tsy mihatsara ..., tsy ny fanoloran-tena, fa ny fahaiza-misaina, fa ny firesahana amin'ny olona toa anao dia miresaka toy ny ampondra, azo antoka fa afaka milaza ianao fa ny banga dia tsara kokoa noho ny photoshop na libreoffice dia tsara noho ny ms office 2013.
Tsy mitsahatra miady hevitra ianao nefa tsy misy fototra azo hamarinina, ny hevitrao ihany, izay miova rehefa naseho fa tsy manana famaritana mazava ianao.
Raha heverinao fa ny ezaky ny olona iray hanao zavatra tian'izy ireo, ho an'ny fahafinaretany manokana ary ho ampiana azy ireo dia mizara izany amin'ny hafa, dia fako, satria averiko fa io ihany ny hevitrao, ary araka ny hevitrao hafa hevitra feno fitsarana an-tendrony sy avonavona, jereo ny mody fantatro izay eritreretiko momba an'io na ilay rindrambaiko nefa tsy fantatrao (tsy lazaina intsony fa mampitovy ahy amin'ny biby ianao) ary sahia mibaiko ny mpamorona izay mety indrindra amin'ny GNU / linux mifototra amin'ny masonao manokana .
Araka ny efa noresahiko tany @jorgemanjarrezlerma, fanontaniana momba ny fomba fiasa io, ao amin'ny rindrambaiko izay ny filoha, komity na fikambanana hafa no mibaiko ny làlana, misy ny fampandrosoana, satria ny iray amin'ireo tanjona farany dia ny vokatra (mazava ho azy, izany amin'ny farany dia azonao atao ny mamoaka an'io kaody io ambanin'ny lisansa malalaka); Etsy ankilany, amin'ny rindrambaiko maimaim-poana ny tanjona farany dia ny mpampiasa, fa tsy ny vokatra, ary raha tokony hisy ny fampandrosoana dia misy ny fivoarana (tsy maintsy mazava ireo teny ireo); Noho izany, paradigma samy hafa izy ireo, (iriko mbola hisy iray na dinosaury iray hafa, fa inona no hataontsika?) Ny evolisiona dia dingana miadana, feno fihenam-bidy ary mifototra amin'ny fisafidianana ny matanjaka indrindra, amin'ity tranga ity, ny fa manana fanohanana bebe kokoa avy amin'ny fiaraha-monina sy ny tian'ny mpampiasa izy (tsy voatery hoe "tsara indrindra", amin'ny teny nindramina satria somary foto-kevitra ny teny), fa indraindray ny fihazohazantsika sy ny fitaintainantsika hanana ny "tsara indrindra" izao! Io dia ahafahantsika mahita an'izany, ary vao mainka miharatsy kokoa aza raha ampidirintsika ny hambom-po amin'ny fampitoviana ary mikasa ny hanafaingana ny fivoarana izahay nefa tsy manome na inona na inona amin'izany.
Ilay mitaky ny hanambaran'ireo mpamorona hery hampiakarana ny DE tsara indrindra amin'ny GNU / Linux, avy eo mandoa azy ireo, fotoana, satria tsy manana adidy izy ireo.
Aza manahy tsia, tsy hangataka na inona na inona amin'ny devs aho, na iza na iza te-hanohy hanao rindrambaiko tsy misy fotony, na iza na iza te hanohy hamorona mpilalao mitovy amin'ny arivo ary tsy misy amin'izy ireo no miasa tsara, ampiasao hatrany izany, ampiasaiko ny mac osx ary ao anatin'izany ireo tetikasa vitsivitsy. rindrambaiko maimaimpoana heveriko fa tsara, inkscape, gimp, clementine….
Ary eny, afaka manao izay tianao ianao, saingy tsy midika izany fa satria misy roa aminareo manao azy, tsy manana kalitao io rindrambaiko io ary mandany ny fotoananao ianao. Rindrambaiko tsy misy ilana azy. Tokony isaorana ireo orinasa toa an'i Canonica, Red Hat, Opensuse, izay farafaharatsiny manao zavatra mahasoa. Amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, ny tanjona farany amin'ny tranga vitsivitsy dia ny mpampiasa, satria ny mpampiasa dia tsy maintsy omena ny tsara indrindra, ny tsara indrindra amin'ny hatsarana, ny tsara indrindra amin'ny fampandehanana, ny ankamaroan'ny fotoana ny hany zavatra arosony dia ho an'ny roa na telo Ny olona amin'ny faniriany samirery mba hisongadina dia te-mody ny hatsaran-tarehin'izy ireo amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny kodiarana (izay mitranga ihany koa amin'ny an'ny manokana), fa tsy misy zavatra hafa…, eo ianao izao. Tsy miova hevitra aho, mbola tsy nanao an'io, ataoko faratampony ny famaritana azy ireo, koa aza miteny zavatra izay tsy nolazaiko, satria mieritreritra ianao fa manoratra tsara ianao, satria manoratra be ianao nefa tsy milaza na inona na inona, araka ny lazainay any Italia * Tutto fumo e ni arresto *
@ pandev92 Ny fahaizanao mifoka tena tsy mitsahatra mahagaga ahy.
Tsy haiko hoe inona no mahatonga anao hieritreritra fa tokony hiahiahy ahy na olon-kafa hoe manao / mampiasa zavatra ianao na tsia.
Ireo disqualification rehetra ataonao amin'ny asan'ny olona sasany dia averiko indray, dia ny hevitrao, manaja nefa tsy misy vokany toa ny an'ny hafa.
Amin'ireto orinasa ireto ny ampahany betsaka (angamba ny maro an'isa) an'ny vondrom-piarahamonina GNU / Linux misaotra azy ireo (ny tenako eo aminy), dia mahazo tambiny ara-bola mihitsy aza izy ireo noho ny fandraisany anjara (tandremo izany).
Rindrambaiko maimaimpoana (ary tsy hevitro) no kendrena any amin'ny mpampiasa, koa mikasa indrindra hiaro ny zava-dehibe indrindra, filaminana, fahamendrehana, fiainana manokana, etika ary fitondran-tena izy, lasa ny fahafahan'izy ireo.
Ny estetika sy ny fampiasana mora no ao ambadika.
Raha araka ny voalazanao dia tsy manova ny hevitrao ianao ary mbola mieritreritra fa ny faculté izay omen'ny SF ho an'ny mpamorona hamorona fork arivo sy iray dia tsy fahalalahana fa fandotoana, dia manana fenitra roa heny ianao, satria misy lahatsoratra vitsivitsy etsy ambany milaza fa fahazoan-dàlana mamela anao hanova (mamorona forks tafiditra) ary na dia hanidy ny kaody aza dia malalaka kokoa izany.
Mino aho fa faly aho milaza kely eo anelanelan'ny teny marobe, satria io kely io dia azoko tohanana amin'ny zava-misy sy ny angon-drakitra marina, fa tsy ny fahendrena fotsiny amin'ny hevitro manokana.
Tsy miombon-kevitra aho, heveriko fa diso ny fampitahana amin'ny GNU / Linux satria ny fizarana rehetra (na saika ny rehetra) mizara fehezan-dalàna "base" mitovy (kernel, tranomboky C, Xorg, sns), noho izany dia mitovy amin'ny fideranao azy Raha ho an'ny mpizaha dia misy ny fototra "tsy manam-paharoa" ary avy eo no anaovana fanovana ambaratonga avo kokoa (interface, ohatra). Raha ny momba ny rafitry ny fonosana an'ny disos, mety ho marina aho, saingy fantatsika rehetra fa ny "fanitarana" dia tsy mifanaraka amin'ny mpizaha samy hafa na dia mampiasa motera iray ihany aza. Ireo tranga roa dia tena mitovy.
Efa misy sorona, dragonfly
Ho ahy dia manana tsiro marikivy sy mamy eo am-bavako aho, satria miampy ny fifanarahana, saingy manaparitaka ny fahalalahana ity hetsika ity, na dia afaka maimaim-poana aza ny webkit dia hanomboka fandaharana ho an'ny webkit izahay fa tsy ho an'ny tranonkala, tahaka ny nataony mega tamin'ny chrome, ka io dia ho iexplore 2.0, ratsy loatra
Amin'izao fotoana izao amin'ny fahatsapana sy ny toa azy, heveriko fa tsy niova firy izy io, antenaiko fa, ny tombony lehibe azo amin'ny opera dia satria avy amin'ny ozinina vonona ho an'ny ankamaroan'ny zavatra rehetra ...
Hitako ny ho avy ho zavatra eo anelanelan'ny mpitety opera sy yandex ankehitriny, saingy miaraka amina rohy opera iray tafiditra, ny motera rss, m2 (mpanjifa mailaka), mpitantana misintona sy torrent ary ireo fanitarana azy
ary heveriko fa ny dragonfly dia azo soloina mpamaky kaody miloko, tsy misy na inona na inona hanoratana ao an-trano momba ny 😀
ny manonofy tsy misy vidiny
Diniho fotsiny fa tsy maimaim-poana ny webkit, misokatra izy io. Ary noho ny fitomboan'ireo mpitety tranonkala mampiasa azy dia eo an-dàlana io, araka ny voalazanao, fa izy no voalohany.
Ny zavatra mampihomehy dia maro ireo mpitsikilo ao anatin'ny GNU / Linux no mandray azy .. mampatahotra ity ..
satria tsy maimaim-poana, amin'ny idealy?
Loharano misokatra izy io, izay tsy mitovy amin'ny maimaim-poana. Araka ny nasongadin'i @RudaMacho dia misy ampahany ao ambanin'ny fahazoan-dàlana GPL (maimaim-poana izany ampahany izany) ary miaraka amin'ny BSD (loharano misokatra ity), saingy amin'ny maha singa iray azy dia tsy azo heverina ho rindrambaiko maimaimpoana izany.
Miala tsiny fa mifanohitra aminao, fa ny BSD mbola malalaka kokoa noho ny GPL.
Inona no ananan'ny sasany. Rindrambaiko manana fahazoan-dàlana BSD dia rindrambaiko maimaimpoana. Ny zavatra iray hafa dia tsy fahazoan-dàlana atolotry ny FSF.
Andao hojerentsika, heveriko fa zavatra mampisavoritaka antsika, tsy manome hevitra tsy misy fototra aho na mifototra amin'ny filozofia, raha hitako fa loharanom-baovao misokatra ny webkit dia satria miantso ny tenany ho toy izany izy ireo.
Ampy ny mamaky ny andalana voalohany, fa ny lohateny hoe "Tetikasa loharano misokatra WebKit" hahafantarana fa tetikasa loharano misokatra izy io, avy eo azonao atao ny mandinika ny famaritana ny loharano misokatra sy ny rindrambaiko maimaim-poana amin'ny loharano azo antoka toy ny wikipedia hahita fa tsy mitovy izy ireo.
Ny fahazoan-dàlana BSD malalaka kokoa noho ny GPL dia fijanonana feno, ary mieritreritra aho fa tsy mbola nanonona zavatra manondro ny mifanohitra na mifanaraka amin'izany.
Tsy azoko tsara ny anao @stuff. Tsy maninona ny fomba fiantsoan'izy ireo ny tenany. Izay rindrambaiko manana lisansa GPL + BSD dia rindrambaiko maimaimpoana satria loharano misokatra. Mikaroha BSD eto:
Tsy haiko raha toa izany ka efa fikasana hanao trolling ka averiko ary averiko hoe:
"Ny fahazoan-dàlana BSD malalaka kokoa noho ny GPL dia teboka misaraka" Tsy mametraka zavatra toa izany aho hiadian-kevitra, indrindra rehefa eo ambanin'ny toerana toy ny hoe "na inona na inona fiantsoan'izy ireo ny tenany". Raha tsy jerentsika ny ekipa Webkit, dia inona izany? raha manohy toy izao isika, dia afaka miatrika ny zava-misy fa tsy maninona izay antsoin'izy ireo hoe lisansa BSD ary tonga amin'ny hadalana.
Angamba mba hahatakarana ahy dia mila manazava ny antony ianao Webkit dia heverina ho loharano misokatra, fa tsy maintsy manontany azy ireo ianao, satria tsy misy zavatra resahiko eto.
@staff Andao hojerentsika raha hazavaiko: Raha manontany an'i Stallman ianao dia hilaza aminao izy fa Linux-libre dia rindrambaiko maimaimpoana. Raha manontany an'i Raymond ianao dia hilaza aminao izy fa loharano misokatra. Misy ny olona mankasitraka ny "loharanom-baovao" misokatra ho an'ny antokom-pinoana sy ny olon-kafa miloka amin'ny "logiciel malalaka". Na inona na inona antsoin'izy ireo azy, ny zava-dehibe dia ireo fahazoan-dàlana tafiditra ao anatin'izany famaritana izany (ary mitovy izy ireo amin'ny lafiny iray). Webkit dia tsy loharanom-baovao misokatra satria milaza izany ny mpamorona azy. Raha mamorona rindrambaiko aho ary tsy manome fidirana amin'ny kaody, dia ho loharano mikatona sy rindrambaiko tompona miaraka aminy (tsy maninona izay antsoiko azy).
@ Windóusico Ankehitriny raha resy lahatra ahy ianao fa fanandramana mamily fiara ity.
Voalohany tsy takatrao ary ankehitriny ianao no manazava izany ho ahy, liana te hahafantatra.
Manohy an'io filàna io ianao hisintona hevitra momba ny famaritana ny sahan'ny filozofika (hatramin'ny voalohany dia nilaza aho fa tsy fikasako izany), noho izany dia mampiasa adihevitra mifototra amin'ny tsy fahalianana ny hevitry ny developer ianao ary ny tena ratsy kokoa, amin'izay heverinao fa olon-kafa Mieritreritra izy ireo, sa efa niresaka tamin'i Stallman sy i Raymond ianao?
Raha te handresy lahatra olona ianao fa Webkit dia rindrambaiko maimaim-poana mifototra amin'ny zavatra takatrao amin'ny alalany, azoko atao ny manoro hevitra ny mandeha miaraka amin'ireo mpamorona azy ary mizara ny hevitrao, mety hisy fiantraikany izany, saingy amiko dia mifototra amin'ny famaritana ara-bakiteny aho fa tsy amin'ny tsy misy dikany ny fandikana manokana.
ho an'ny morpheus, aza mampiasa demagoguery, fahalalahan'ny zanak'olombelona, ​​tsy azo ampitahaina amin'ny kaody, ny kaody dia tsy olona, ​​tsy manana zony ary izy ireo dia tsipika tsotra fotsiny.
Ny iray hafa, ny fahazoan-dàlana BSD dia TSY mamela anao hanidy ny kaody izay navoakanao ambanin'io fahazoan-dàlana io, fa mamela anao haka izany kaody izany hahazoana derivatives propriétaires, fa ny kaody voalohany navoakanao ambanin'ny BSD, dia mbola BSD, JEREO HITA raha hitantsika.
@staff Tsy azoko ianao sy AOKA (rehefa namaky ny hafatrao hafa) dia hitako fa nisavoritaka ianao (izay tazominao). Manoro hevitra anao aho hamaky ity boky nosoratan'i Stallman ity (ilainao izany):
Vakio tsara ny pejy 42 sy 43. Webkit dia rindrambaiko maimaimpoana ary loharano misokatra (samy miaraka amin'ny fotoana iray). Ireo mpamorona Webkit dia miombom-pihetseham-po amin'ny OSI (fa tsy ny FSF), ka izany no antony itiavany ny "loharano misokatra". Nanoratra ianao fa "Webkit tsy maimaim-poana, misokatra izy" ary tsy mitombina izany (toy ny tohin'ny hevitra) fa ny tenanao ihany.
@ Windóusico, Raha faritana, ny rindrambaiko maimaimpoana rehetra dia tafiditra ao amin'ny sokajy loharano misokatra fa tsy ny loharano misokatra rehetra ao anatin'ny sokajy rindrambaiko maimaimpoana. noho izany, ny fananana sombin-rindrambaiko maimaimpoana dia tsy midika hoe ho toy ny singa iray dia azo raisina ho toy izany.
Ny fanjohian-kevitra mitovy amin'izany dia ny milaza: miresaka momba ny biby mampinono ity boky ity; ny alika dia biby mampinono, ka boky alika ity.
Ohatra iray hafa: ny SL rehetra dia mifanaraka amin'ny GNU / Linux, ka ny GNU / Linux dia SL. (Heveriko fa nahatonga anao hieritreritra fa afaka maminavina izay holazain'i Stallman ianao)
Fa io fisainana io koa dia tsy mety, jereo fotsiny http://www.gnu.org/distros/free-distros.html.
Raha lazaiko aminao fa ny rindrambaiko misy ampahany amin'ny loharano misokatra dia tsy azo heverina ho rindrambaiko maimaimpoana, tsy noho ny fahaizako izany, satria ny famaritana azy no manamarika izany, avelao aho hampiasa ny loharano hanazavana azy.
"Ny teny hoe" rindrambaiko maimaim-poana 'sy' loharano misokatra 'dia mamaritra ny sokajy rindrambaiko mitovy na kely aza, SAINGY MAMPIASA INDRINDRA NY ZAVATRA MOMBA NY SOFTWARE SY NY VALINY. "
@staff, heveriko fa tsy azonao ny andalana voalaza ao. Ny zavatra apetrakao amin'ny sora-baventy dia ireo hevitra mifono hevitra sy filozofika nolazainao fa tsy raharahianao (azavainy tsara izany avy eo). Mijanona amin'ilay ampahany milaza hoe "Ireo teny hoe" rindrambaiko maimaimpoana "sy" loharano misokatra "dia mamaritra ny sokajy rindrambaiko mitovy na kely fotsiny" ary avy eo vakio ny hevitra voalohany novaliako.
Ampahatsiahiviko anao ihany koa fa tsy miresaka momba ny rindrambaiko misokatra rehetra akory izahay dia lozisialy maimaimpoana (misy lisansa roa tsy zaraina). Ny zavatra iadiako hevitra aminao dia ny Webkit dia rindrambaiko maimaim-poana sy loharano misokatra. Stallman ao amin'ny lahateniny dia mihevitra fa ny rindrambaiko maimaimpoana dia rindrambaiko rehetra manatanteraka ireo fahalalahana malaza ary mangataka amin'ny olona tsy hampiasa ilay teny hoe "loharano misokatra". Aza averina intsony fa tsy rindrambaiko maimaimpoana ny Webkit.
Ary mba handaminana ny raharaha indray mandeha, dia holazaiko aminao fa ny rindrambaiko manana lisansa BSD sy GPL dia manaja ny fahalalahan'ny mpampiasa, noho izany dia rindrambaiko maimaimpoana io. Ka Webkit (BSD + GPL) dia rindrambaiko maimaimpoana (manome antoka ny fahalalahana efatra). Vakio am-pitoniana ilay boky.
Ka tsy maintsy mahatakatra lahatsoratra tsy ara-bakiteny aho, fa araka ny hevitrao? Sa ireo ampahany omenao ny ankihibenareo ihany no tokony hovakiako mba hifanaraka amin'ny hevitrao?
Avelao aho hanesotra ny teny notsongainao tamin'ny sehatry ny mozika (mitovy amin'ny haino aman-jery, na izay tianao.) Hizaha raha mazava kokoa izany.
"Ny teny hoe 'Black metal' sy 'Death metal' dia mamaritra ny sokajy mozika mitovy na kely aza"
Manaraka ny lojikao (tsy mamaky tanteraka satria tsy mifanaraka amiko ny manaraka) azoko fantarina fa mitovy izy ireo, saingy aleon'ny sasany miantso azy io amin'ny fomba hafa na hafa, fa avela ianao hiantso azy io toa ny fahitako azy, na dia mifanohitra amin'ny hevitra mozika an'ilay mpamoron-kira ihany.
"Bebe na kely" dia tsy mitovy amin'ny "mitovy."
Angamba ity tsy fahazoan-kevitra ity dia resaka hevitra, ampitahanao ny rindrambaiko maimaim-poana amin'ny loharano misokatra, izay amin'ny famaritana (tsy noho ny filazako azy) dia tsy marina.
Misafotofoto koa ny fanajana amin'ny fiantohana,
«Manaja ny fahalalahan'ny mpampiasa ny BSD sy ny GPL, noho izany rindrambaiko maimaimpoana izany. Ka Webkit (BSD + GPL) dia rindrambaiko maimaimpoana (manome antoka ny fahalalahana efatra) »
Tsy mitovy ny antoka sy ny fanajana.
Tavoahangy feno rano miaraka amin'ny angano, mendrika ny tsy hisian'ny sunburn ianao, tsy sunscreen izy io satria manaja ny zoko hiaro tena amin'ny taratra UV, ny tabilao masoandro no manome antoka (mifototra amin'ny mety hitranga) aza avela hitranga amiko izany.
Ho an'ny famaritana, ampy ny fanajana, fa raha ny fampiharana dia tsy maintsy manome antoka izy.
Izany no antony anehoan'ny wikipedia azy:
«Fahafahana rindrambaiko maimaimpoana
Lahatsoratra lehibe: Famaritana ny rindrambaiko maimaim-poana.
Araka io famaritana io dia "afaka" ny rindrambaiko rehefa manome toky ny fahalalahana manaraka: ... "
Mametraka ohatra tsy mety ihany koa ianao rehefa milaza fa afaka mamorona programa ary manao azy ho fananana amin'ny tsy fampisehoana ilay kaody fotsiny, izany dia hadisoana azo hamarinina mora foana; Azoko atao ny mamorona programa sy mampiseho ny kaody ao aminy fa mizara izany amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana tsy mamela ny fampiasana azy, ny fanovana na ny fanaovana kopia raha tsy nahazo alalana tamiko, avy eo raha toa ka lasa tompony izy, na inona na inona fahafahan'ny hafa mahazo ilay kaody.
Aza manandrana manakorontana ny lohahevitra @staff. Raha omeko anao ny mimari-droa tsy misy fidirana amin'ny kaody, dia lozisialy manana sy tompony mihidy izany mandra-panaporofoiko fa tsy izany. Raha manome fidirana amin'ny kaody aho fa mametraka fahazoan-dàlana hananana, dia loharanom-baravarana mihidy ihany koa io araka ny OSI (zavatra izay tsy azonao takarina) sy rindrambaiko manana.
Ary ho an'ny ambiny, dia mitsoka foana ianao hanakonana ny lainga lehibe tsy Webkit fa rindrambaiko maimaimpoana. Lazao amiko izay fahalalahana Webkit izay tsy manome antoka araka izay fantatrao. Ny FSF dia mihevitra ny fahazoan-dàlana BSD + GPL mifanaraka ary tafiditra ao anatin'ny sokajy rindrambaiko maimaimpoana. Marina izany, tsy ny fandikany izany. Raha vakianao tsara ny rohy ataoko dia efa fantatrao izany.
Raha ny momba ny "Black metal" sy ny "Death metal" dia tsy haiko ireo karazana ireo, fa raha mizara ireo tarika mozika mitovy amin'ny fanilikilihana roa izy ireo dia ekeko izany (na dia tsy manimba ny hevitro aza izany).
Ok, tonga tamin'ilay teboka izahay fa tsy manana ady hevitra intsony ianao ary manomboka mivantana kokoa ny fanafihana, troll par excellence ianao.
Raha heverinao fa manintona ahy na mifoka hanarona lainga aho dia averiko hatrany am-boalohany izay napetrako.
Raha lazaiko fa loharano misokatra ny webkit dia noho izy ireo niantso azy ireo ho toy izany, ary mbola hanohy hanao izany aho satria ny vondrona fampandrosoana dia loharano azo antoka kokoa noho ianao sy ny filozofika fa tsy ara-bakiteny ny famaritana ny rindrambaiko malalaka, loharano misokatra , kaody mihidy, rindrambaiko manana, fanajana ary antoka.
Izay kasainao hotohanana mifototra amin'izay heverinao fa holazaina na izany toetra izany, na loharano izay tokony hadika araka izay avelanao.
Raha heverinao fa tsy mety ilay webkit iray, dia ny hevitrao ary raha liana amin'izy ireo ianao amin'ny fijanonan'ny antso webkit open source dia izy ireo no tokony ahitsinao.
Mikasika ny ohatra mozika dia tsy fantatro ny antony ilazanao fa tsy manimba ny adihevitrao izany, raha toa ianao ka manaiky fa ny adihevitra iray nitanisa loharano iray dia tsy mety fa manitsy ny atiny hitarika ny fandikana azy araka izay tianao.
Ary noho ny hadisoanao fa ny fandefasana programa tsy misy kaody dia manova azy ho lozisialy fananana, azavako.
Ny rindrambaiko dia lasa manana, raha, ary raha tsy hoe, eo ambanin'ny fahazoan-dàlana manan-kery izany.
Ohatra, manao ny programa ianao ary mihinana ny USB nisy ilay kaody, vonona. Raisiko ilay fandaharana, volavolainay, adikao, ovaiko, ary zaraiko amin'ny alalàn'ny fahazoan-dàlana X fa tsy afaka manao na inona na inona hisorohana ahy tsy hanao azy ianao na handoa vola amin'ny tranomaizina / vola raha manao izany aho, satria tsy nanana fahazoan-dàlana manokana ianao.
Fantatro fa tsy fotsy na mainty ny raharaha, fa manandrana mampahafantatra anao aho fa ny fotsy dia sady fotsy no tsy mainty.
Ny programa izay mampifangaro ampahany amin'ireo rindrambaiko maimaim-poana + zavatra X, mijanona tsy rindrambaiko maimaimpoana.
Raha manana kavina volamena 10 grama sy volafotsy 10 grama aho, dia volamena sy volafotsy izany, saingy tsy afaka mitety an'izao tontolo izao aho manambara fa mivarotra ny peratra volamena 20 grama aho.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny mazava momba ireo hevitra.
Izany "Ny FSF dia mihevitra ny fahazoan-dàlana BSD + GPL mifanentana ary tafiditra ao anatin'ny sokajy rindrambaiko maimaimpoana izy ireo." io fotsiny no tsy tiako ho tonga satria olana misaraka ary manery antsika hametraka teny vaovao toy ny "logiciel malalaka permisive" (izay tsy rindrambaiko maimaimpoana, rindrambaiko maimaimpoana mamela malalaka).
Izany no antony tsy ahafahantsika milaza fa tsy maninona ny fomba iantsoan'izy ireo ny tenany hoe webkit, raha amin'ny faran'ny andro dia fantatr'izy ireo ny foto-pisainany sy ny filozofiany (tsy zavatra azontsika atao ny mitaona azy) ankoatry ny ananany ny fahamendrehana sy ny mari-pahaizana ampy ka Azonao atao ny mieritreritra fa raha antsoina hoe loharanom-baovao misokatra izy ireo dia tsy noho ny tsy fahalalana no anaovany azy.
@staff Ny fahazoan-dàlana rindrambaiko maimaimpoana dia fahazoan-dàlana malalaka. Webkit ihany no mampiasa lisansa rindrambaiko maimaimpoana, noho izany dia rindrambaiko maimaimpoana izany. Ny zavatra hafa rehetra dia be loatra.
Raha mamorona rindrambaiko aho ary milaza fa manana alalana amin'ny GPL fa tsy manome ny kaody loharano, tsy ho lozisialy maimaimpoana izany raha tsy avelako hiditra amin'io kaody io satria mitaky izany ny fahazoan-dàlana. Jereo ny nuansa "mandra-panaporofoina raha tsy izany" dia tena zava-dehibe. Etsy andanin'izany, tsy fantatro fa mora be ny mandefa kaody azo ampiasaina amin'ny kaody lozisialy ho an'ny kaody loharano, ny injeniera miverina dia tsy maintsy lalaovin'ny ankizy. Tsy azoko ny antony manantitrantitra i Stallman fa zarainay ny kaody loharano raha mora be ny mahazo azy amin'ny fanatanterahana azy.
Efa nolazaiko anao teo aloha fa ny mpandrafitra Webkit dia tsy mifanaraka amin'ny filamatra ao amin'ny FSF, noho izany dia mampiasa "loharano misokatra" izy ireo. Tsy misy antony ara-teknika na ara-dalàna hiantsoana azy io ho rindrambaiko maimaimpoana.
Mamporisika anao aho hamaly ahy eto (ary vakio ihany):
Ireo zavatra lazainao ireo dia tsy marina satria milaza azy fotsiny ianao dia mametraka ny hevitro ho zava-misy fotsiny.
Ary ankehitriny rehefa manohy mametaka tsy misy fototra ianao dia manova ny hevitrao, ho porofo manonona anao aho:
»Raha mamorona rindrambaiko aho ary tsy manome alalana ny kaody, dia ho loharano mihidy sy rindrambaiko tompona amin'ny fotoana iray izy»
Noporofoiko fa diso ianao ary niova ho:
"Raha mamorona rindrambaiko aho ary lazaiko fa manana lisansa GPL izy io saingy tsy manome ny kaody loharano, tsy ho rindrambaiko maimaimpoana izany"
Ary na izany aza tsy mandeha amin'ny laoniny rehefa miteny aho fa lasa manana ny lozisialy raha toa ka eo ambanin'ny fahazoan-dàlana manan-kery io.
Mety mbola mino ianao fa raha tsy fotsy ny zavatra dia mainty izy ireo, raha tsy maimaim-poana ny rindrambaiko dia tsy midika izany fa fananana azo antoka izany.
Raha atao famaritana, raha toa ka tsy miantoka ny fahafahanao mampiasa lisansa ny rindrambaiko iray, nefa tsy manakana anao amin'izany amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana hafa, dia sady tsy tompony no tsy maimaim-poana.
Tsy nilaza aho fa mora ny injeniera avadika, fa raha mbola tsy azo atao kosa dia mitombina ny adihevitra ary tsy misy dikany ny hatsaranao.
Ary zavatra iray hafa izay toa tsy fantatrao dia ny tsy ny rindrambaiko rehetra no zaraina amin'ny endrika binary ary ny rindrambaiko dia tsy ny kaody ihany.
Mbola manana ny avonavona mody mahalala hoe inona no eritreretin'ny hafa ve ianao, na ahoana no ahalalanao izay idealy tohanan'ny mpandrindra webkit rehetra? tsy ara-dalàna ireo hevitra ara-kevitra ireo.
Averiko indray: Ho ahy dia tsy mitombina ny fitarihana ahy amin'izay lazain'ny bilaogera tsy misy mari-pahaizana milaza ny paikadim-pandresen-dahatra feno hadisoana.
Manamarina aho amin'ny fitanisana:
“Misy ny milaza fa ny 'sokajy rindrambaiko mitovy na mihoatra ny iray' dia midika hoe sokajy roa samy hafa izy ireo. Diso izany. "
Hevitra tsotra tsy misy sanda rehefa mankany amin'ny rakibolana ianao ary manamarina fa ny mihoatra na ny kely dia afaka manondro zavatra mitovy na zavatra eo ho eo, saingy tsy mitovy amin'ny mitovy.
"Apetrak'i Stallman 'bebe kokoa na latsaka' izy io mba tsy ho tratra ny rantsantanany satria ny OSI dia manaiky lisansa sasany nolavin'ny FSF (ary ny mifamadika amin'izany)."
Ity voalaza etsy ambony ity dia fiovan'ny fallacy ad verecundiam, izay iarovanao teoria iray miorina amin'ny eritreritry ny olona malaza iray momba an'io lohahevitra io.
Amin'ity tranga ity, inona no eritreretin'ilay bilaogera fa mieritreritra ny toetrany ary ny antony anaovany an'izany.
Miala tsiny amin'ny fandavana ny fanasana nataonao aho, saingy tsy mikasa ny hanome hevitra amin'ny bilaogy aho, raha jerena ny tsanganana ankavanana, dia ianao sy ny mpampiasa desdelinux iray hafa (heveriko fa voasakana sy misy hevitra "troll" marobe).
Manasa anao aho fa ny fanehoan-kevitrao manaraka dia tohanan'ny loharanom-baovao marim-pototra, tsy misy fanitsiana ary azo takarina ara-bakiteny (tsara kokoa raha misy rakibolana eo an-tànana) fa tsy hevitry ny lohahevitra.
Manaraka ny torohevitra "Aza fahano ny troll" dia manao veloma ity lahatsoratra ity aho fa tsy hiditra intsony hamaky fanamarihana intsony na hamaly azy ireo.
@staff Tena tianao ny manapa-kevitra araka ny tokony ho izy. Tsy nanoratra aho «Raha manome mimari-droa anao aho nefa tsy mahazo miditra amin'ilay kaody, dia lozisialy tompony». Nanoratra aho hoe "Raha manome binary anao aho nefa tsy afaka miditra amin'ilay kaody, dia lozisialy tompony sy loharanom-baovao mihidy izany mandra-panaporofoiko fa tsy izany." Tokony ho hitanao ny tsy fitovizany.
Mbola averinao foana fa hevitro fotsiny ny ahy, diso tokoa ianao (ary heveriko fa efa fantatrao izao). Ny tohan-kevitrao dia ny famantaran'ireo mpandrindra Webkit ny tetikasany ho rindrambaiko loharano misokatra. Omeko ohatra ianao mba hahitanao fa mora ny manala izany. OpenSSH dia tetikasa manana fahazoan-dàlana BSD ary apetrak'ireo mpamorona ao amin'ny tranonkalany fa rindrambaiko maimaimpoana izany. Araka ny fanjohian-kevitrao, diso ny Webkit (BSD + GPL) na ny OpenSSH (BSD). Ankoatr'izay, ny mpitarika ny tetikasa OpenSSH dia natolotry ny FSF tamin'ny "2004 Free Software Award" ary io olona io dia miasa amin'ny alàlan'ny lozisialy manana fahazoan-dàlana BSD. Raha tsy ny fahazoan-dàlana manamarika ny sokajy "rindrambaiko maimaimpoana" dia holazainao amiko hoe inona no dikan'ny fanasokajiana araka ny hevitr'ireo mpandahatra programa.
Ankehitriny efa lany ny tohan-kevitra ianareo, hitako fa ara-dalàna fa tsy manohy ny adihevitra ianareo. Io no zavatra hendry indrindra azonao atao.
Ho an'i @ pandev92 sy ny "demagoguery":
Andao apetraka amin'ity fomba fijery ity:
Amin'ny maha programmer ahy, BSD dia manafaka ny kaodiko (tena "misokatra" izy io)
GPL dia mitaky ihany koa fa tsy afaka ny kaodiko ary ny kaody rehetra ateraky ny olona avy amiko. GPL mieritreritra ny vondrom-piarahamonina. Ny fandaharan'asako eo ambanin'ny GPL dia ho eo amin'ny sehatry ny daholobe.
Izay no mahatonga azy MAIMAIMPOANA.
Ny olona iray afaka manararaotra ny asako nefa tsy mamerina na inona na inona ho an'ny fiarahamonina dia tsy manome alalana "malalaka" bebe kokoa. Izany no hevitra Fahalalahana amin'ireo mpamorona ny teny hoe "Malalaka" ho an'ny kaody.
Andao hojerentsika raha hahalala ...
"Miala tsiny fa mifanohitra aminao, fa ny BSD mbola malalaka kokoa noho ny GPL."
TSY MAINTSY, tsy haiko izay antony tsotra lazainao.
Betsaka ny ranomainty voasoratra amin'ilay lohahevitra na dia eto amin'ny DL aza.
Ny GPL dia fahazoan-dàlana miantoka ny FAHAFAHANA NY CODE ho avy mba hahafahana mamerina sy miverina ampiasaina hatrany.
Ny BSD dia fahazoan-dàlana tsy misy dikany satria manome kaody noforonina ho an'ny fiarahamonina , maimaimpoana, nefa tsy mitandrina mba hiarovana ny fampiasam-bola ataon'ny vondrom-piarahamonina.
IIRC BSD dia teraka tao amin'ny Univ. Of Berkeley, Kalifornia. Berkeley dia nanapa-kevitra ny hamoaka ny kaody clone AT&T Unix izay novolavolain'ny mpianatra sy ireo nahazo diplaoma tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana izay tsy nametraka karazana fameperana, anisan'izany ny CANNIBALIZE tenany.
Noho ny fahaizan'ny GPL, ireo orinasa manana loharanom-pahalalana ampy mba hanaovana fivoarana lehibe mifototra amin'ity fahazoan-dàlana ity dia niverina angamba mihoatra ny nalaina tamin'ny vondrom-piarahamonina tany am-piandohana ary izany no fototry ny fitomboana, izay namela ny fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina GPL. Rindrambaiko maimaim-poana.
Sarotra ny manao faminaniana marina momba ny mety ho lahatra saingy azontsika atao ny mieritreritra fa amin'ny toe-javatra mitovy amin'ny fahazoan-dàlana BSD, ireo orinasa ireo dia azo antoka fa ny ampahan'ny ampahany azon'izy ireo nomena noho ny GPL.
Ny GPL dia mijery ny ho avy, ny BSD mijery ny foitra.
Diso ny fomba fahitanao ny fahalalahana, fahazoan-dàlana manala ny fahafahako hanakatona ny kaody, tsy afaka intsony izao, ny fahalalahana dia miankina amin'ny fisafidianana ny ratsy na ny tsara, raha ny tsara ihany no safidiko, dia tsia Malalaka aho, mpivavaka aho, izay tsy mitovy amin'izany. Ny BSD dia mitandrina fa maimaimpoana ny kaody ary afaka mampiasa azy amin'izay tiany ny olona, ​​ny fomba tiany ary ny fotoana tiany nefa tsy mila manome fanazavana ary tsy mila iharan'ny fameperana filozofika. Ka eny, malalaka kokoa ny licence bsd noho ny GPL.
Ny fahazoan-dàlana mamela ny rindrambaiko maimaimpoana ho tonga tsy afaka dia tsy afaka "malalaka" noho ny iray hafa.
Toy ny famelana (na ny fananana "fahalalahana") hanala ny fahalalahan'ny hafa izany.
Toy ny hoe: "Ao amin'ny taniko dia malalaka noho ny anao izahay, satria ny mponina rehetra dia manana" fahalalahana "hanafina izay tiantsika"
* maka ankeriny
Raha hanazava bebe kokoa aza dia mety ny mahita izay eritreritr'ireo mpamorona ny teny hoe "Free Software":
Soa ihany fa nanazava tamin'ny fomba mazava sy tamin'ny fomba tena sivilizasiona ianao mba hananana any @pandev ny maha adala azy, satria efa tratry ny tsy mahay mamaky teny ratsy toy izany aho.
NAOTY: tsy fantatro i Morpheus, ilay zavatra "adala" mankany pandev92 dia mihazakazaka irery amiko.
Avy amin'ny zavatra novakiako tao amin'ny wikipedia, ny ampahany iray amin'ny webkit dia manana fahazoan-dàlana BSD, ny iray hafa GPL, noho izany maimaim-poana, arahaba.
Tsara sy ratsy.
Browser izay manavao foana dia namorona ny haitao voalohany ary nandaka ny rora foana.
Tsy inona izany fa ny fihenam-bidy
Amin'ny lafiny iray dia faly aho, saingy tsy maintsy averiko ny kaody ny maodeliko ...
Ny fahitana amin'ity lafiny ity, na avy amin'i Elav na avy amin'ny mpamaky hafa, dia marina ihany, fa ny tokony hamakafaka dia ny antony sy ny antony. Na dia manana ny antony aza ny Staff (izay tsy namela ahy ny valiny) dia tsy mitarika na inona na inona ny zava-misy tsotra amin'ny fivoarana ary raha hitantsika amin'ny fomba fijery fahombiazana sy fahavelomana, ity karazana paikady ity dia miteraka fanjavonana. Na dia amin'ny "teôria" aza ity ezaka ity dia tsy very maina ary azo averina mambo, tato anatin'ny 22 taona lasa (hatramin'ny nanombohako ny fiainako teto amin'ity tontolo LINUX ity) dia nahita asa tena tsara sy tena tsara izay hadino ary tena nanjavona tamin'ny sarintany.
Amin'ny maha mpanolotsaina ahy an'ity haino aman-jery ity dia niezaka foana aho hampiroborobo ny safidy maimaim-poana, saingy amin'ny tranga sasany, ny fahasamihafana tafahoatra dia midika fa tsy manana tanjaka ilaina hanamafisana (ohatra, KDE, XFCE, Gnome, Gimp, Blender, LibreOffice, sns. nahavita freehand izy ireo satria manana ny ampahany mahasoa azy ireo) izay misy tsiro sy fotoana ratsy. Ankehitriny, ny tontolon'ny IT dia manaraka ny fironana (toy ny tontolon'ny lamaody) ary ny fironana ankehitriny dia ny mitondra ny Apps (iOS na ny fomban'ny Android) mankany amin'ny birao mba hanara-penitra ny interface sy hampihenana ny làlan'ny fianarana.
Izaho manokana dia mihevitra sy mino fa ny fihoaram-pefy (toy ny amin'ny fahasalamana) dia ratsy ary amin'ny fotoana maharitra dia aloa ny vidiny. Novell, Canonical, Red Hat, Mozilla Foundation, sns dia ohatra tsara fa ny mifaninana dia tsara sy mahasalama, fa raha dinihintsika tsara hoe maninona ny fahombiazan'izy ireo dia ny manadihady, manavao, fa ny vokatra farany manolotra vokatra tena marin-toerana. ankoatry ny vina lavitra.
Heveriko fa ity Opera ity dia nanipy ny tady amin'ny vozony. Ny zavatra tsara indrindra dia ny nandeha tamin'ny làlan'i Google: afaho i Presto ary manohy mitarika ny baton hanao ny fanovana amin'ny Opera, ary avelao ny hafa hanao kinova hafa mifototra amin'izany.
Ilaina ny manolotra ny famotsorana Presto, izany dia fomba iray hamerenana izay ho raisin'izy ireo amin'ny FOSS
Toa dingana tsy fahombiazana amiko izany. Ny motera Presto dia ampy tsara, mitovy amin'ny WebKit. Ny tsy fitoviana amin'ny Opera dia vokatry ny ampahany, ho an'ireo mpamorona, ary ho an'ny Google tenany ihany.
Ireo pejy tsy mifanaraka amin'ny Opera ihany no pejy Google, mahaliana iza, sa ahoana?
Rube dia hoy izy:
Topim-peo fotsiny ho an'ny Opera io. Tena mino aho fa maty tokoa ity Opera ity. Raha misy zavatra mahaliana amin'ity tetikasa Opera iray manontolo ity dia ny fahaizan'ny Norvezianina. Samy naka tahaka ny Opera daholo izy ireo, namorona ny Opera ary ny ambiny kosa naka tahaka azy ireo tamin'ny fomba miharihary; saingy hita fa nanapa-kevitra hamono tena i Opera, mihoatra ny ahy izany.
Ho lasa lapdogs ho an'ny Google Corporation ve izy ireo? Hmmm… Tsy mandoa vola i Roma.
Miarahaba ahy Opera.
Mamaly an'i Rube